စာကျက်ပျင်းတဲ့ ကလေးနဲ့ ၄၃၆ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Politics, Issues » စာကျက်ပျင်းတဲ့ ကလေးနဲ့ ၄၃၆
စာကျက်ပျင်းတဲ့ ကလေးနဲ့ ၄၃၆
Posted by Zaw Thant on May 29, 2014 in Politics, Issues | 43 comments
များသောအားဖြင့် ကိုယ့်အနေနဲ့ နိုင်ငံရေးစိတ်မဝင်စားတဲ့သူတွေကို ဝေဖန်တာ၊ အပြစ်တင်တာ လုပ်လေ့မရှိပါဘူး.. ဘာလို့လဲဆိုတော့ စိတ်ဝင်စားတယ်၊ မဝင်စားဘူးဆိုတာ ကိုယ့်လွတ်လပ်ခွင့်နဲ့ကိုယ် ဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီအခွင့်အရေးကို သွားဝေဖန်ခွင့်မရှိဘူးလို့ယူဆထားလို့ပါ..
အခု ပုဒ်မ၄၃၆ ကိစ္စနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီးလဲ ထောက်ခံတာ၊ ဆန့်ကျင်တာ၊ စိတ်မဝင်စားတာ၊ စိတ်ဝင်စားတာ ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှုပဲ ဖြစ်လို့ ဝေဖန်ဖို့မရှိပါဘူး.. ဒါပေမယ့် နည်းနည်းပြောချင်တာ တချို့တော့ရှိတယ်.. ဆရာကြီးလုပ်တယ်ပဲဆိုပါတော့ (သူများမပြောခင် ကိုယ်ဟာကိုဦးအောင်ပြောထားရတာ)
ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ပြောနေ၊ကြားနေကြစကားက “သူများနိုင်ငံတွေဖွံဖြိုးတာကို အမှီလိုက်ဖို့ ကျွန်တော်တို့တွေ အများကြီးကြိုးစားရမယ်၊ သူများ ၁လှမ်းလှမ်းရင် ကိုယ်က ၁၀ လှမ်းလောက်လှမ်းနိုင်ရမယ်” ဘာညာပေါ့.. ဘာတွေ ၁၀ လှမ်းလောက်လှမ်းကြမလဲ.. ကိုယ်အခုလုပ်လက်စ အလုပ်တွေ ၁၀ စလောက်ကြုံးလုပ်လိုက်ရင်ပဲ နိုင်ငံကြီးတိုးတက်သွားမလား? (အလုပ်ရှင်ကတော့သဘောကျမှာသေချာတယ်) ကျွန်တော့်အမြင်ကတော့ အခု ၄၃၆ ပြင်တဲ့ကိစ္စမျိုးက အရေးကြီးတဲ့ ကနဦးခြေလှမ်းလို့ထင်တယ်.. ဒီလိုခြေလှမ်းမျိုးများများလှမ်းနိုင်ဖို့ အရေးကြီးတယ်လို့ မြင်တယ်..
ဒါပေမယ့် တချို့ကျတော့လည်း စိတ်မဝင်စားကြဘူး.. နိုင်ငံရေးစိတ်မဝင်စားပါဘူး ပေါ့.. ဦးနှောက်သေးသေးလေးမို့ပါ ဘာညာပေါ့.. ဘာနဲ့သွားတူနေကြလဲဆိုတော့ စာမေးပွဲမအောင်သေးပဲ စာကျက်ပျင်းနေတဲ့ ကလေးတွေနဲ့တူပါတယ်.. စာကျက်ဖို့စိတ်မပါဘူး၊ ပျင်းတယ် အဲ့တော့ စာမေးပွဲမအောင်ဘူး၊ အသက်သာအိုသေသွားတယ် စာတတ်မသွားရှာဘူး.. အခုလည်း နိုင်ငံရေးစိတ်မဝင်စားဘူး၊ ပျင်းတယ် အဲ့တော့ နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲလည်းမဖြစ်ဘူး၊ ကိုယ်တွေလည်း အသက်သာကြီးလာတယ် လူမွေးလူရောင်မပြောင်သေးဘူး.. တချို့လူတွေ နိုင်ငံရေးစိတ်မဝင်စားဘူး ဆိုတာက ကိစ္စမရှိဘူး.. အဲ့လူတွေက သူတို့သွားရာ လမ်း ဖြစ်အောင် ဖောက်နိုင်တယ်၊ နှာစီးချောင်းဆိုးဖြစ် စင်ကာပူ သွားကုနိုင်တယ်၊ သားသမီးတွေ ဖောရိမ်းပို့ကျောင်းထားနိုင်တယ်.. စာမေးပွဲအောင်ပြီးသားလူတွေလို့ပဲဆိုပါစို့.. ဒါပေမယ့် ကိုယ်အပါအဝင်၊ လူလတ်တန်းစားတွေ၊ အခြေခံလူတန်းစားတွေ အတွက်ကျ အပြောင်းအလဲကလိုပါတယ်.. ၄၃၆ က ပထမဆုံးအရေးကြီးတဲ့ အဆင့်မှာပါပါတယ်.. (ဘာကြောင့်အရေးကြီးတယ်ဆိုတာကတော့ တခြားလူတွေရေးပြီးသားရှိမှာပါ).. အဲ့တော့ စိတ်ဝင်စားတာ မဝင်စားတာနောက်ထား စာကိုကျိတ်မှိတ်ကျက်ပြီး စာမေးပွဲ အောင်အောင် ဖြေသလိုမျိုး ၄၃၆ ပြင်နိုင်ဖို့ လက်မှတ်ထိုးတာလေး၊ ဘေးတီးပေးတာလေးလောက်တော့ စ်ိတ်မဝင်စားလည်း လုပ်သင့်ပါတယ်.. (စာရွက်တွေကိုင်ပြီး လမ်းဖို့ထွက်ဖို့ အထိမလိုပါဘူး၊ ကိုယ်လည်းမလုပ်နိုင်ပါဘူး)
စင်ကာပူလိုမျိုး (အားအားရှိ သူတို့ကိုပဲ ဥပမာပေးနေရတယ်)လူမူ့စီးပွားရေးအခြေအနေ အဆင့်တစ်ခုရှိလာတဲ့အချိန်ကျရင် နိုင်ငံရေးစိတ်မဝင်စားလဲ ရတယ်.. သူတို့ဆီမှာက အစိုးရအပြောင်းအလဲဖြစ်တောင် ကိုယ့်အလုပ်ရှင် အပြောင်းအလဲဖြစ်တာလောက် ကိုယ့်အပေါ် effect ရှိချင်မှရှိမှာ.. ကိုယ်တွေဆီကျတော့ ကိုယ့်ကိုနွှာမယ့် အစိုးရတက်လားမလား၊ ပျော့ပျော့နဲ့ နှပ်ချမယ့် အစိုးရ တက်လာမလား၊ တကယ်ဦးဆောင်ပေးမယ့် အစိုးရလားတက်လာမလားဆိုတာက ကိုယ်တွေရဲ့ အားထုတ်မှုပေါ်မူတည်တယ်.. စိတ်မဝင်စားလို့ အားမထုတ်ပဲ ဝေးဝေးနေတယ်ဆို ဒုံရင်းဒုံရင်းဘဝနေနေပြီး စာကျက်ပျင်းလို့ အတန်းတက်မလာတဲ့ ကလေးတွေ ဘဝရောက်နေရလိမ်မယ် (ကိုယ့်ဘဝတိုးတက်ရေး ကိုယ်ဟာကိုလုပ်လို့ရတာက အတိုင်းအတာတပိုင်းပေါ့)..
၄၃၆ လေးပြင်တာနဲ့ ဘယ်လောက်တိုးတက်သွားမှာလဲ၊ ဘာပြောင်းလဲသွားမှာမို့လဲ? တချို့ကလည်း စိတ်မဝင်းစားဘူးဆိုတာထက် မထူးပါဘူးဆိုတဲ့ စိတ်မျိုးရှိတာ.. သူငယ်တန်းအောင်တာနဲ့ ဆရာဝန်တန်းဖြစ်သလား၊ ဘယ်လောက်ချမ်းသာသွားမှာမို့လဲ လို့ မေးတာနဲ့တူနေပါတယ်.. သူငယ်တန်းအောင်တာနဲ့ဘာမှမထူးပေမယ့် Phd လောက်ရဖို့ဆိုလည်း ဒီအဆင့်ကပဲစရမှာပါ၊ မီးနင်းလေးတစ်လုံး၊ သင်္ချာပုဒ်စာလေးတစ်ပုဒ် စီနဲ့ ပဲတဆင့်ချင်းသင်ခဲ့၊ စာမေးပွဲတွေအောင်ခဲ့ကြတာပါပဲ.. အခုလည်း ပုဒ်မလေးတစ်ခုလောက်၊ တစ်ပိုဒ်လောက်ပြင်ရင်း၊ မဲပေးရင်း၊ အားပြိုင်ရင်းနဲ့ပဲ ပြောင်းယူကြရတာပေါ့.. ကိုယ့်မျိုးဆက်မှာ မမှီတောင် ကိုယ့်သားမြေးတွေအလှည်ကျ တိုးတက်နေရင်ပဲ မဆိုးပါဘူး.. အခုစာဖတ်နေသူတွေကို ကလေးတစ်ယောက် အစာငတ်နေလို့ ၁၀၀၀ လောက်လာပေးပါဆိုရင် ပေးမယ့်သူချည်းပါပဲ.. ဒါဆို နောက် အနှစ် ၂၀ မှာ အစာငတ်နေမယ့် ကလေး ၁ သန်းလောက်ကို ကယ်ဖို့ ကနဦးအဆင့် လက်မှတ်လေး တစ်ချက်လောက်ထိုးဖို့လိုတယ်ဆိုရင်ကော ပင်းပန်းတယ်၊ ပျင်းတယ် ဆိုမလား..
About Zaw Thant
Zaw Thant has written9post in this Website..
View all posts by Zaw Thant →
နာ့ အချစ်ကို စောင်းပြောတဲ့ စာကြောင်းတစ်ခု ပါသော်လည်းးးး
ဒီကိစ္စကို စိတ်ရောကိုယ်ပါ အားစိုက်နေချင်ချိန်မို့ ခွင့်လွှတ်လိုက်ပါ့မယ်။
.. စကားလုံးလေးကြိုက်လို့ ယူသုံးလိုက်တာပါ..
NLD ကိုယ်စားလှယ်တွေ အဲဒီ အခြေခံဥပဒေရေးဆွဲတဲ့ ညီလာခံကနေ မထွက်သင့်ဘူးဗျ။ အဲဒီတုန်းက စိတ်လိုက်မန်ပါ ထွက်တော့ သူတို့စိတ်ကြိုက်ရေးဆွဲလို့ရသွားတာပေါ့။ အဲဒီတုန်းက မနုတ်ထွက်ဘဲ အတွင်းစည်းထဲမှာ အတိုက်အခံပြောဆိုခဲ့ရင် ဒီလိုဖြစ်လာမယ်မထင်ဘူးလေ။
အခုမှပြင်ချင်တယ်ဘာတယ်ဆိုတော့ စည်းဝိုင်းအပြင်ကနေ တွန်းလှန်နေရပြီလေ။
.. အဲ့ဒါလည်း ဆွေးနွေးချင်စရာတော့ကောင်းသား.. ဒါပေမယ့် သူ့တို့ ညီလာခံကနေထွက်တုန်းက ကျွန်တော်က ကလေးပဲရှိသေးတော့ ဘာမှမသိလိုက်ဘူးဗျ.. ဟိုဖက်ကပဲ ညစ်သလား၊ NLD ကပဲ ခေါင်းမာသလားမပြောတတ်ဘူး.. ကိုယ်တိုင်မသိလိုက်တဲ့ကိစ္စဆိုတော့ အမှန်အမှား ပြောရခက်တယ်ဗျ..
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း စာကျက်ပျင်းတဲ့ လူတစ်ယောက်ပါ ကိုဇော်သန့်ရေ…။
ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်နဲ့ပဲ မဆိုင်သလိုလို နေနေတယ်ဆိုတာ ၀န်ခံပါတယ်…။
ဒီပို့စ်ကနေ အသိတစ်ခု ရလိုက်ပါတယ် ဗျာ…။
ကျွန်တော် စာကျက်မှ ဖြစ်မယ်…။
.. ကို ဘလက် ပြောမှပဲ ရေးရတာ အားတက်သွားသဗျာ.. ရေးကတည်းက အမြင်တူတဲ့လူတွေ ကြိုက်ဖို့ထက် အမြင်မတူသေးတဲ့လူတွေ စဉ်းစားစရာရစေချင်တာက အဓိကဗျ..
ကျမလဲ စာကျက်ပျင်းတဲ့ ကလေးဖြစ်နေတာ။စာကျက်မှဘဲ။
.. စာမေးပွဲတွေ အောင်မှပဲ အားလုံးအတူတူ စာကျက်ပျင်းကြတာပေါ့ဗျ နော..
သဘူတောပါတယ် ကိုဇော်သန့်… ဗရာဗိုပါ…
နိုင်ငံရေးလုပ်ရမယ်လို့ လည်း ဇွတ်အတင်းမတိုက်တွန်းပါဘူး…
ဒါပေမည့် ကိုယ်မလုပ်ချင် မလုပ်ရဲတာနဲ့…
“xxxx တာလည်း ကျနော့ရဲ့ နိုင်ငံရေးပါ” လို့ ဝါးချ မှိုင်းတိုက်တာ ပိုဆိုးမယ်ထင်ပါတယ်…
အဲသည့်လိုဆို အရက်သမားကလည်း အရက်သောက်တာ သူ့နိုင်ငံရေးလို့ ပြောမှာပေါ့…
ကိုယ့်မျိုးဆက်အတွက် “၄၃၆” ကနဦးခြေလှမ်းလေးတော့ ရဲရဲလှမ်းကြပါလို့…
ဒီလူဂျီးတွေတော့ ချစ်လွန်းလို့ အတော်သည်းခံနေတာနော်။
သများ အချိလေးကို ပြောတာ များနေပြီ။
.. celebrity ဆိုတော့ ဒီလိုပဲ ရောဖိန့်ရတယ်နဲ့ တူပါတယ်ဗျာ.. ဘယ်သူ့မှတော့ အပြစ်မပြောလိုပါဘူး.. ကိုယ် နိုင်သလောက်တိုက်တွန်းကြတာပေါ့..
အဲဒီပုဒ်မက ဘာကိုပဲပြင်ပြင် ခလုတ်တိုက်နေတာဆိုတော့
၅၉ (စ) အတွက် မဟုတ်တောင်
ကျန်တဲ့အချက်တွေပြင်ဖို့ သူ့ကို ပြင်ကိုပြင်ရမယ်သဘောဖြစ်နေတယ်။
ပြီးတော့ မမျှမတ တစ်ဖက်သတ်ဖြစ်အောင်ပြင်မှာလည်းမဟုတ်
အခု ပြင်ဖို့ ပြထားတဲ့ ပုံစံ
(က)ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသောကိုယ်စားလှယ်အားလုံး၏ သုံးပုံနှစ်ပုံက ပြင်ဆင်ရန် သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံး၏ ထက်ဝက်ကျော်က ပြင်ဆင်ရန်သဘောတူလက်ခံပြီးနောက်
ပြည်လုံးကျွတ်ဆန္ဒခံယူပွဲအထမြောက်ပါက ဆန္ဒမဲပေးသူဦးရေ၏ ထက်ဝက်ကျော်ဆန္ဒမဲဖြင့် ပြင်ဆင်သင့်ပါသည်။
(ခ) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခြင်းခံရသော ကိုယ်စားလှယ်အားလုံး၏ သုံးပုံနှစ်ပုံ သို့မဟုတ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်အားလုံး၏ ထက်ဝက်ကျော် ဆန္ဒမဲဖြင့် ပြင်ဆင်ရန်။
က လက်ခံနိုင်ချေရှိတာပဲ။ fair လဲ ဖြစ်တာပဲကို
မတူတာဘေးချပြီး လုပ်သင့်တာလုပ်ဖို့ ဒီအချက်ကိုတော့ ပြင်သင့်တယ်ပဲမြင်တယ်ဗျာ။ ဒီမနက် ဖတ်လိုက်ရတဲ့ ကန့်ကွက်ဖို့ပို့စ်တွေအားလုံးနီးပါးက ကလေးအတွေးတွေ ဖြစ်နေသလိုကြီး
.. ဟုတ်တယ်ဗျ.. အခုပြင်ဖို့ကြိုးစားနေတာ NLD ကဆိုပေမယ့် အမှန်တော့ ပါတီအားလုံးနဲ့ ဆိုင်တာပဲ.. ဒါပေမယ့် NLD အတွက်လည်း အရင်ဆုံးစဖြည်ရမယ့်ကြိုးလိုဖြစ်နေတယ်.. fair ဖြစ်မယ့် ပုံစံတစ်ခု အရင်ရပြီး လွှတ်တော်အတွင်းလုပ်သာကိုင်သာရှိလာရင် ကျေနပ်ပါတယ်..
ဒါပေမယ့် ကျန်တာတွေ အကုန်လုံးက ငြိမ်နေတာကိုတော့ မသင်္ကာချင်သလိုလို…….
.. NLD ကိုသိပ်မကြည်ဘူးလားမသိ.. ဒင်းတို့လုပ်ပစေ ဆိုပြီးပစ်ထားတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်.. PR လိုကိစ္စမျိုးမှာလည်း အကြိုက်မတူကြဘူးလေ..
ဖွဘုတ်မှာ ထဲကဖတ်ခဲ့ပြီးပါပြီ ကိုဇော်သန့်ရေ…ဗရာဗိုပါဗျာ…
ဒီကိစ္စမှာတော့ ကျုပ်တို့ပါနိုင်ပါတယ်…ပင်းပန်းတယ်၊ ပျင်းတယ် မပြောပါဘူးဗျ
.. ပျင်းနေတဲ့လူတွေ တွေ့ရင်လည်း တိုက်တွန်းလိုက်ပါဦးဗျ..
ကောင်းကင်ပြာလဲ စာကျက်ပါ့မယ်လို့ လာဝင်ပြောတာ ကိုဇော်သန့်ရေ။
.. ဟုတ်ကဲ့ဗျ.. ကျေးဇူးပါ..
လက်မှတ်အရေအတွက်ဟာ.. မြန်မာပြည်. အခြေအနေလုံးဝပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
အိုဘားမားတက်တော့.. အသားမဲက..သမ္မတအဖြစ်ကျမ်းကျိန်ပွဲကို.. witnesses to history အဖြစ်လာကြသွားကြပါလို့ဖိတ်တာ..
အခုကတော့.. မြန်မာ့သမိုင်းအပြောင်းအလဲတခုရဲ့.. အစဖြစ်သွားနိုင်ဖို့များပါတယ်..
လက်မှတ်ထိုးနေပုံလေးကိုပါ.. မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံရိုက်ထားပြီး.. ဘိုးဘိုး..ဘွားဘွားတွေဖြစ်ချိန်..မြေးမြစ်တွေကို.. ပြန်ထုတ်ပြကြစေချင်..
.. အဟုတ်ပဲဗျ.. ကမ္ဘာက အစိုးရကိုဖိအားပေးချင်တောင် အတိုက်အခံနဲ့ ပြည်သူ့ရဲ့အရိပ်အကဲ ကြည့်လုပ်ရတာဖြစ်နေတော့ ပြည်သူကိုယ်တိုင်က အီလေးဆွဲနေရင် အပြင်လူက ငပွကြီးလုပ်ချင်မယ်မထင်ဘူး (သူတို့အကျိုးရှိရင်တော့ တမျိုးပေါ့).. အခုလိုကိစ္စမျိုးတိုင်းမှာသာ ပြည်သူတွေညီညွတ်ရင် တဆင့်ပြီးတဆင့် အပြောင်းအလဲဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်..
လက်မှတ်ထိုးနေပုံလေး မှတ်တမ်းတင်ဓာတ်ပုံရိုက်တာကတော့ celebrity တွေ လုပ်ကြပါတယ်ဗျ..
.. ပျင်းတာတော့ အတူတူချည်းပါပဲဗျ.. ကျွန်တော်လည်းခက်ခက်ခဲခဲ ဆို မလုပ်ဖြစ်ပါဘူး..
စာကြက်​ဖို့ ပျင်း​ပေမဲ့ လက်​မှတ်​ထိုးဖို့​တော့ မပျင်းဘူးဗျို့ သွားထိုမှာ သူငယ်​ချင်း​တွေကို​တောင်​မှာထားတယ်​ ၁-၆- ၂၀၁၄ လက်​မှတ်​ထိုးပွဲကို သတိ​ပေးဖို့ ။ ကျုပ်​တို့ဆီမှာ ဇွန်​လ ၁ရက်​​နေ့မှလုပ်​မှာ ဗျ ခင်​ဗျားလဲ အဲ့​နေကျရင်​ လက်​မှတ်​သွားထိုးဖို့ ကျုပ်​ကို သတိ​ပေးဦး အသက်​က ကြီးလာ​တော့ ​မေ့တတ်​တယ်​
.. online သုံးဖြစ်နေရင်တော့ မမေ့လောက်ပါဘူး.. လတ်တလောတော့ ဒီသတင်းတွေပဲတွေနေရမှာကိုးဗျ..
NLD ခြေဥရေးဆွဲတဲ့ အမျိုးသားညီလာခံကနေ နှုတ်ထွက်ခဲ့လို့လဲ ဒီကနေ့ ရဲရဲပြင်ခိုင်းနိုင်တာခင်ဗျ။ သမိုင်းတရားခံ ထဲ မပါခဲ့လို့ပါခင်ဗျ။ ဒီလှိုင်းစာစောင်ထဲမှာ အသေးစိတ်ရေးပြထားခဲ့ဘူးပါတယ်။ အမျိုးသားညီလာခံ မှာ တနိုင်ငံလုံးရွေးကောက်ခံNLD ကိုအိမ်ဖြည့်အဖြစ် မတတ်သာလို့ ထည့်ခဲ့ပါတယ်။ ညောင်၂ပင်မှာ ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ် ၂၀ % မပြည့်ခဲ့ပါဘူး။ ဘာမှလုပ်လို့မရအောင်စီစဉ်ထားတဲ့ လိမ်နေတဲ့ ညောင်၂ပင်ပါ။ NLD ထွက်ခဲ့တာ မမှားဘူးလို့ ကျနော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျ။
.. ရှင်းပြပေးတာ ကျေးဇူးပါ .. ကျွန်တော်မမှီလိုက်တော့ ဘာတွေဖြစ်ခဲ့မှန်းသေချာမသိပါဘူး.. အခုချိန်ကျမှ အဲ့ဒီကိစ္စပြန်ပြောကြရင်လည်း ဟိုဖက်နဲ့ဒီဖက် အပြန်အလှန်အပြစ်တင်တာတွေပဲ ကြားရမယ်ထင်ပါတယ်.. လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေပေါ်ကနေ အကောင်းဆုံးလုပ်ကြတာ အဖြစ်သင့်ဆုံးထင်ပါတယ်.. ဒေါ်စု လည်း ဒီလိုပဲ သဘောထားပုံပေါ်ပါတယ်..
ခြေဥရေးဆွဲရာကနေ နှုတ်ထွက်ခဲ့တာဟာ NLD လုပ်သင့်ရာကိုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ် မှန်တယ်လို့ကျနော်ယုံကြည်ပါတယ်။ ဒီလှိုင်းစာစောင်မှာ အတော်များများရှင်းပြထားပါတယ်။
တက်ခဲ့ရသူ နှုတ်ထွက်ခဲ့ရသူ တစ်ဦးနဲ့ အနီးကပ် ဆွေးနွေးခွင့်ရခဲ့လို့ NLD မမှားခဲ့ဘူးလို့ ပြောလိုပါကြောင်း။
သာမီး ဒီနေ့ စာရပါပြီ ဦးဦးဇော်သန့်။
လက်မှတ် ထိုးပြီး စာရွက်ကို ဒီနေ့ အီးမဲ ပို့လိုက်ပါပြီ။၊
.. စိုင်းစိုင်းလက်မှတ်ထိုးတယ် ဆိုမှ လိုက်ထိုးတာလား ..
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ သဘောထားဟာ ဖွဲ့စည်းပုံကို လွှတ်တော်ထဲမှာပဲ ပြင်လို့ရအောင် ကြိုးစားမယ်၊ ရွေးကောက်ခံ အမတ်တွေကပဲ ပြင်ခွင့်ရချင်တယ်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့ အခွင့်ထူးတွေ ရုပ်သိမ်းပြီး စစ်တန်းလျား ပြန်သွားတဲ့ အဆင့်ရောက်အောင် အထိ ပြင်ချင်တယ် ဆိုတာပါပဲ။
“ ၄၃၆ ပြင်ရေး ဘာဆက်ဖြစ်လာနိုင်သလဲ ”
မဇ္ဈိမ သတင်းစာ၊ ၂၉-၅-၁၄။ စာ-၉။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ အင်န်အယ်လ်ဒီ နဲ့ ၈၈ ပွင့်လင်းအဖွဲ့ ပူးပေါင်း အကောင်အထည် ဖော်နေတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေထဲက ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ရေး လှုပ်ရှားမှု အရှိန်ရစ ပြုနေပါပြီ။ မေလ ၂၇ ရက်နေ့ကဆို ၄၃၆ ပြင်ရေး လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ၈၈ မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တိုင်းသိပြည်သိ အနုပညာရှင်တွေ ပါဝင်လက်မှတ်ထိုးရင်း အစ ပြုပေးလိုက်ပါတယ်။ တစ်ပြိုင်နက်တည်း တစ်တိုင်းပြည်လုံးမှာ ရှိတဲ့ အင်န်အယ်လ်ဒီ ရုံးတွေနဲ့ ၈၈ ပွင်းလင်းအဖွဲ့ ရုံးတွေမှာလည်း လက်မှတ်ထိုးနိုင်အောင် ပြင်ဆင်ပေးထားကြပါပြီ။ အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ ၄၃၆ မပြင်ရေး ကျိုးတိုးကျဲတဲ ဆန္ဒပြပွဲတစ်ချို့ နေပြည်တော်မှာ ပေါ်လာသလို နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့ ပြိုင်ပွဲကို ဒိုင်လူကြီး လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကလည်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ဟောပြောချက်တွေဟာ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေက ခွင့်ပြုထားတဲ့ ဘောင်ကို ကျော်နေတယ် ဆိုပြီး သတိပေးမှုတွေ လုပ်လာနေပါပြီ။ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ ၄၃၆ ပြင်ရေး လှုပ်ရှားမှု အောင်မြင်နိုင်ပါ့မလား၊ ဘာအခက်အခဲတွေ တွေ့နိုင်မလဲ၊ ဘာတွေ ဆုံးရှုံးနိုင်မလဲ ဆိုတာ ဒီကနေ့ ဆွေးနွေးတင်ပြသွားပါ့မယ်။
ပထမ အရေးကြီးတာက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြောတဲ့ ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ရေး ဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတာ အရင်သိဖို့ လိုပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ၂၀၀၈ ထဲမှာ ဖွဲ့စည်းပုံထဲက ပုဒ်မတွေကို ဖြုတ်ချင်တယ်၊ ပြင်ချင်တယ် ဆိုရင် ပုဒ်မ ၄၃၆ ပါ ပြဌာန်းချက်အတိုင်း ပြင်ရမယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ ပုဒ်မ ၄၃၆ မှာပါတဲ့ ပြင်ဖို့ နည်းနာတွေကတော့ ပြင်ချင်တာတွေကို ဥပဒေကြမ်း အရင် လုပ်ရပါမယ်။ ဥပဒေကြမ်း ရလာရင် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ကို တင်ရပါမယ်။ ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်ထဲက အမတ် ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းက သဘောတူတယ်ဆိုရင် အဲဒီ ဥပဒေ မူကြမ်းကို စ ပြီးဆွေးနွေးခွင့်ရပါမယ်။ ပြီးရင် မဲခွဲပြီး ပြင်ရပါမယ်။ မဲခွဲတဲ့အခါ တစ်ချို့ ပုဒ်မတွေကို အမတ် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းအထက် သဘောတူညီချက်နဲ့ ပြင်နိုင်တယ်၊ တစ်ချို့ ပုဒ်မတွေကိုတော့ အမတ် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ရုံမက ပြည်လုံးကျွတ် ဆန္ဒခံယူပွဲ လုပ်ပြီးမှ ပြင်နိုင်မယ်လို့ ဆိုထားတာပါ။ ဒါရဲ့ တကယ့် အဓိပ္ပါယ်ကတော့ ဖွဲ့စည်းပုံထဲက တစ်ခုခု ပြင်ချင်ရင် တပ်မတော်သားအမတ်တွေ သဘောတူမှ ပြင်နိုင်မယ်၊ သူတို့ သဘောမတူဘူး ဆိုရင် ပြင်လို့မရဘူးလို့ ဆိုတာပါ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ပြင်ချင်တာက ဖွဲ့စည်းပုံကို ရွေးကောက်ခံ အမတ်တွေရဲ့ သုံးပုံနှစ်ပုံ က သဘောတူရင် ပြင်နိုင်တယ် ဆိုတာမျိုးပါ။ အဓိပ္ပါယ်က တပ်မတော်သား အမတ်တွေ သဘောတူတူ မတူတူ ရွေးကောက်ခံ သုံးပုံနှစ်ပုံက သဘောတူရင် ပြင်လို့ရတာမျိုး လိုချင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုလည်း လူထု စုဝေးပွဲတွေမှာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောပါတယ်။ အဓိကအားဖြင့် ဖွဲ့စည်းပုံထဲမှာ တပ်မတော်က အခွင့်ထူး ရယူထားတာကို ဖယ်ရှားချင်လို့ လို့ ဆိုပါတယ်။ တစ်နည်း တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က အခွင့်ထူး ရထားတာတွေကို ရုပ်သိမ်းချင်တယ်၊ စစ်တပ်ကို ဂုဏ်သိက္ခာရှိရှိနဲ့ စစ်တန်းလျား ပြန်သွားဖို့ လုပ်ချင်တယ် ဆိုတာပါပဲ။ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေးကို လွှတ်တော်တွင်းကပဲ လုပ်စေမှာဖြစ်ပြီး လက်ရှိ လက်မှတ်ရေးထိုး ဆန္ဒကောက်ခံနေတာဟာ ပြည်သူတွေရဲ့ ဆန္ဒသဘောထား ဘယ်လိုရှိသလဲ ဆိုတာ လွှတ်တော်က သိစေဖို့ ငြိမ်းချမ်းတဲ့နည်းနဲ့ ဥပဒေဘောင်အတွင်းက လုပ်ရတာလို့ ဆိုပါတယ်။ တိုတိုတုတ်တုတ် ပြောရရင် ဖွဲ့စည်းပုံကို လွှတ်တော်ထဲမှာပဲ ပြင်လို့ရအောင် ကြိုးစားမယ်၊ ရွေးကောက်ခံ အမတ်တွေကပဲ ပြင်ခွင့်ရချင်တယ်၊ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့ အခွင့်ထူးတွေ ရုပ်သိမ်းပြီး စစ်တန်းလျား ပြန်သွားတဲ့ အဆင့်ရောက်အောင် အထိ ပြင်ချင်တယ် ဆိုတာပါပဲ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေနဲ့ ဒီလှုပ်ရှားမှု လုပ်နေတဲ့ အချိန်အတောအတွင်းမှာပဲ လွှတ်တော်ထဲမှာ အမတ်နေရာ အများစု ရယူထားတဲ့၊ ဖွဲ့စည်းပုံ ပြင်ဆင်ရေး ကော်မတီမှာ လူများစု ပါဝင်နေတဲ့ ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီကလည်း ကြေငြာချက် ထုတ်ပါတယ်။ လိုရင်းတိုရှင်းကတော့ ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရေးနဲ့ ပါတ်သက်ရင် ပါတီဗဟိုကော်မတီက အတည်ပြုထားတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး အကြံပြုချက်တွေအပေါ် အခိုင်အမာ ရပ်တည်နေတယ် ဆိုတာပါပဲ။ အဲဒီ အကြံပြုချက်ထဲမှာ ပုဒ်မ ၄၃၆ နဲ့ ပါတ်သက်ရင် “ အမတ် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်းကျော်” အစား “ အမတ် ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း” ဆိုတာလောက်နဲ့ပဲ ပြုပြင်ဖို့ အကြံပြုထားတာ တွေ့ရပါတယ်။ (တရားဝင် မထုတ်ပြန်ပေမယ့် ပြင်ပ သတင်းဌာန တွေဆီ ပေါက်ကြားချက အရ။်)။ ပြောရရင် တပ်မတော် အမတ်တွေ သဘောတူမှ ပြင်နိုင်မယ် ဆိုတဲ့ မူကို ဆက်ပြီး ဆုတ်ကိုင်ထားဆဲပါ။ တဖက်က တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ကလည်း ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ချင်ရင် ၄၃၆ အတိုင်းပဲ ပြင်ရမယ်လို့ ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားပြီးပါပြီ။ ခြုံငုံပြီးပြောရရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လိုချင်တဲ့ ပုံစံ ၄၃၆ ကို လွှတ်တော်တွင်း ပြင်ရေး ဆိုတာဟာ လွှတ်တော်ထဲမှာပဲ ပိတ်မိနေမယ့် သဘောရှိပါတယ်။ အောင်မြင်ဖို့ လုံးဝ မရှိဘူးဆိုတာ ဖော်ပြနေပါတယ်။ တစ်ဆင့်လောက်တောင် မအောင်မြင်နိုင်ပါဘူး။ ကဲ ဒါဆို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ အင်န်အယ်လ်ဒီ နဲ့ ၈၈ အဖွဲ့ ဘာတွေ ဆက်လုပ်ကြဦးမှာပါလဲ။
အခြားတစ်ဖက်မှာတော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ အင်န်အယ်လ်ဒီ ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ရေး၊ တစ်နည်းပြောရရင် ဖွဲ့စည်းပုံထဲက ပုဒ်မတွေ အများကြီးပြင်နိုင်ရေး၊ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နဲ့ တပ်မတော်ကို စစ်တန်းလျား ပြန်ပို့နိုင်သည် အထိ ပြင်နိုင်ရေး အားကြိုးမာန်တက် လုံးပန်းနေရင် ၄၃၆ ကိုလည်း မပြင်နိုင်၊ အခြား အရေးကြီးတဲ့ ပုဒ်မ တွေကိုလည်း မပြင်နိုင် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ ပြည်သူတွေက ပါတီ တစ်ခုကို အမတ်နေရာ အများစု နိုင်အောင် မဲပေးလိုက်သည့်တိုင် အဲဒီ ပါတီခေါင်းဆောင် သမ္မတ ဖြစ်ဖို့ မလွယ်တဲ့ ပုဒ်မ ၆၀ (င) လို၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်လို အမျိုးသားခေါင်းဆောင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့ သမီး၊ သာမန် နိုင်ငံသားတွေထက် ထူးတဲ့ ဂုဏ်ထူးဆောင် နိုင်ငံသားတစ်ယောက်၊ တိုင်းရင်းသား တစ်ယောက်ကို သမ္မတ ဖြစ်ခွင့်မရှိအောင် ပိတ်ပင်ထားတဲ့ ပုဒ်မ ၅၉(စ) လို ပြင်ရေးတွေကိုလည်း မလုပ်နိုင်၊ လစ်ဟာ သွားနိုင်ပါတယ်။ အကျိုးဆက်အနေနဲ့ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲကနေ ပြည်သူလူထု အများစုကြီးရဲ့ သဘောဆန္ဒကို ထင်ဟပ်တဲ့ သမ္မတ နဲ့ အစိုးရအဖွဲ့ မပေါ်ပေါက်နိုင်တာမျိုး ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
ဒီအခါ ၂၀၁၅ အလွန် ပါလီမန် အသစ်မှာ အင်န်အယ်လ်ဒီဟာ အမတ်အများစု ရကောင်းရနေမှာဖြစ်ပေမယ့် အတိုက်အခံအဆင့် ဆက်ရှိနေမှာဖြစ်ပြီး ပြည်သူတွေကို အုပ်ချုပ်သူကတော့ ဒီလူ ဒီလူ ဒုံရင်းဒုံရင်းဘ၀ အပြောင်းအလဲ မရှိတာမျိုး ဖြစ်ကောင်း ဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် လက်ရှိ ၄၃၆ ပြင်ရေး လှုပ်ရှားမှု ပြန်သုံးသပ်ကြပါ၊ အောင်မြင်မှု မရရင် အင်န်အယ်လ်ဒီ နဲ့ ၈၈ က ရှုံးတာ အရေးမကြီး၊ ပြည်သူတွေ နစ်နာတာက ပိုအရေးကြီးမှာ ဖြစ်ပါကြောင်း သုံးသပ်တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
အန်တီဒုံပြောသလို တကယ်ခေါင်းစားစရာပဲဗျာ.. အထူးသဖြင့် ဒေါ်စု နဲ့ အတိုက်အခံ ခေါင်းဆောင်တွေအတွက်ပါ.. ဒါပေမယ့် အကောင်းဖက်ကတွေးရင် အခုလိုတိုင်းပြည်အတွက် ခေါင်းစား(စဉ်းစား) ခွင့်ရတာကိုက အရင်ကထက်သာလာတဲ့ အချက်ပဲ..
အခုစာရေးသူရဲ့ လိုရင်းကို အနှစ်ချုပ်ရရင် သိပ်ပြင်ဖို့ မလွယ်တဲ့ ၄၃၆ ကို အရင်မပြင်ပဲ တခြား ပုဒ်မတွေကို အရင် ပြင်ဖို့ စဉ်းစားသင့်လား ဆိုပြီးတွေးစရာပေးထားတဲ့ သဘောမျိုးဖြစ်မယ်..
ဒါပေမယ့် သေချာတွေးကြည့်ရင် တခြားပုဒ်မတွေ တစ်ခုတစ်ခုပြင်ဖို့အရေး အမြဲ ၄၃၆ ကြီးကို ဖြတ်နေရရင်တော့ မလွယ်လှဘူး.. တပ်မတော် အနေနဲ့ ၄၃၆ ကိုပြင်ဖို့ ဆန္ဒမရှိသေးဘူးဆိုရင် အတိုက်အခံဘက်ကို အားသားစေမယ့် တခြားပုဒ်မတွေ (ဥပမာ ၅၉ စ)ကိုလည်း လွယ်လွယ်ခွင့်ပြုမယ်မထင်ဘူး.. နောက်ပြီး ပါတီ နဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ် ခေါင်းဆောင်တွေ ဆိုတာလည်း နောက် ၁၀ – ၂၀ အရှည်တည်ဖို့မလွယ်ဘူး.. အခြေခံဥပဒေဆိုတာကြီးက နိုင်ငံတည်သမျှရှိနေမှာဆိုတော့ ဒေါ်စုအနေနဲ့ သူသမ္မတ ဖြစ်ဖို့ထက် လွှတ်တော်တွင်း စစ်တပ်လွှမ်းမိုးမူကိုလျှော့ဖို့ စဉ်းစားပုံရပါတယ်.. ၄၃၆ ပြင်နိုင်လို့ နောက်ဆက်တွဲ ၅၉ စ အပါအဝင် တခြားအရေးကြီး ပုဒ်မတွေကို ပြင်နိုင်ရင်လည်း အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့.. ဒါမှမဟုတ် ၂၀၁၅ မတိုင်ခင် ၄၃၆ တစ်ခုထဲပြင်နိုင်လဲ တိုင်းပြည်အတွက် ခြေတစ်လှမ်းတိုးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်..
၄၃၆ ကို မပြင်ပဲ ၅၉ စ ကိုပြင်ဖို့ သည်းသည်းမဲမဲ ကြိုးစားရင် အာဏာမက်တယ်၊ သမ္မတ ဖြစ်ချင်လို့ ခြေဥပြင်ဖို့ ကြိုးစားတယ် ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်တွေ ရင်ဆိုင်ရဖို့ရှိပါတယ် (ဒါတောင်ပြင်နိုင်ဖို့မသေချာဘူး).. ပြင်နိုင်လို့ သမ္မတဖြစ်လည်း ၄၃၆ ခံနေလို့ လွှတ်တော်အတွင်း NLD ရဲ့ စွမ်းဆောင်မှု အကန့်အသတ်ဖြစ်နေပြီး နာမည်ကြီးထမင်းငတ်ဘဝ ရောက်နိုင်ပါတယ် (ဒေါ်စု သမ္မတ ဖြစ်လာတာလဲဘာမှမထူးပါဘူးဆိုတာမျိုး)..
အဲ့တော့ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင် အမြင်အရ ၄၃၆ ပြင်တာဟာ NLD အတွက်သာမက နိုင်ငံသားအားလုံးအတွက် အရင် အရေးကြီးတဲ့ ခြေလှမ်းလို့ထင်တယ်ဗျ..
(ရုံးပတ်ရက်မို့ ချက်ချင်း reply မဖြစ်တာ sorry ဗျ)
ကိုဇော်သန့်ရေ…စာကျက်တော့မပျင်းပေမယ့် ကျက်တော့ကျက်နေတုံးပါပဲ.. ဆယ်တန်းအောင်ဖို့ကအဓိကလား..စာတတ်ဖို့ကအဓိကလား ဆိုသလိုပေါ့ဗျာ..ကျနော်တို့တော့ လက်မှတ်ထိုးပြီးပြီဗျ…တစ်မိသားစုလုံးထိုးဖို့ကြိုးစားနေသဗျို့…
၄၃၆ ပြင်ရေးသည်..ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သမ္မတဖြစ်ရေး၊မဖြစ်ရေးအတွက်သာမဟုတ် တိုင်းပြည်ကိုတကယ်တိုးတက်စေချင်ရင် လက်တွေ့အကောင်ထည်ဖေါ်ရမဲ့ကိစ္စပါ..သူရဦးအောင်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုပဲပြောသွားပါတယ်…သန်း ၆၀ သောပြည်သူတွေရဲ့ အကျိုးစီးပွါးကိုတစ်ကယ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်…လုပ်ကိုလုပ်ရမယ့်ကိစ္စပါပဲ…
မှန်လိုက်လေ “ခသပက” ရေ။
နာမည်က ရှည်နေလို့ပါ။ :-)))
.. ဟုတ်ပါတယ်ဗျ.. NLD နဲ့ ဒေါ်စု ကလက်ရှိဦးဆောင်လုပ်နေပေမယ့် တကယ်တော့ နောက်တက်မယ့် ဘယ်အစိုးရဖြစ်ဖြစ် အတွက် အရေးကြီးတာပါ.. အားလုံးကြိုးစားသင့်ပါတယ်..
ပြောရရင် ကိုယ့်ပေါင်ကို အရင်ပြန်ထောင်းရမယ်။
အရီးမှာ မြန်မာသတင်း တွေ မဖတ်ဖြစ်တာ ကြာပေါ့။
ဖဘ ထဲမှာ အဲလက်စ် တစ်ယောက် မိန့်မိန့်ကြီးပြုံးပြီး လက်မှတ်ထိုးနေပုံ နဲ့ ၄၃၆ ဆိုတဲ့ ဂဏန်းတွေမြင်တော့ “ဟယ် လာပြန်ပဟ ၉၆၉” နောက်ဆက်တွဲ လို့ ထင်လိုက်သေး။
အစ မဆွဲဘဲ ဒီအတိုင်း ထားလိုက်တာ အခု ရွာထဲဝင်မှ ဇာတ်ရည်လည် တော့တယ်။
ဒါနဲ့ ဘဲ ပိုပြီး သိအောင် ဟိုရှာ ဒီနှိုက် လုပ်မှ အခြေခံ ဥပဒေပြင်ဖို့ ကို ပြင်နိုင်ဖို့ ပုဒ်မ ၄၃၆ ကို ပယ်ဖျက်ဖို့ ဝိုင်းပြီး ဆိုင်းထိုး ကြတာမှန်းသိတော့တယ်။
မင်းရေးထားတဲ့ အကြောင်း နဲ့ ခေါင်းစဉ်လေးကို သဘောကျမိတယ်။
“စာကျက်ပျင်းတဲ့ ကလေး” တဲ့။
တစ်ချို့က စာကျက်ရမယ် ဆိုတာ တောင် အသိမရှိတော့ ခက်ရဲ့။
အရီး ရဲ့ အမေမဟုတ်တဲ့ အမေ က ဆို အရီး နိုင်ငံရေးအကြောင်း ပြောရင် ဘာပြောတယ် ထင်လဲ။
“သမီး တို့ ဘက်မှာလဲ ချို့တဲ့ သူမရှိဘူး။ အမေတို့ ဘက်မှာလဲ ချို့တဲ့ သူမရှိဘူး။ အားလုံး လူတန်းစေ့ နေနိုင် စားနိုင် နေတာ ကို အပိုစကားတွေ ပြောမနေနဲ့” တဲ့။
တကယ်မှာတော့ သူချစ်လွန်းတဲ့ သား၊ သမီးတွေ မြေးတွေ အများစု သူ့နားမှာ မရှိဘဲ အဝေးလွင့် နေရတဲ့ အကြောင်းရင်း ကို သူ သတိမထား မိတာ။
နိုင်ငံထဲ ကိုယ်လုပ်ချင်တာ လွတ်လွတ်လပ်လပ် တင့်တောင့်တင့်တယ် နေနိုင်ရင် ဘယ်သူက တစ်စိမ်းတွေကြားမှာ ပျော် နေပါ့မလဲကွယ်။
အခုတော့ သူ့မျိုးဆက်အသစ် ကို သူ လက်လွတ်နေရပြီ မဟုတ်လား။
နိုင်ငံမှာ လူအရင်းအမြစ် ဆုံးရတာလောက် နစ်နာစရာ ဘာများရှိမှာလဲ။
လူ တွေ ကို လူလို မထားနိုင်တဲ့ မမြင်နိုင်တဲ့ အုပ်ချုပ်သူလက်က လွတ်ဖို့ လူကို လူလိုမြင်တဲ့ သူ လက်ထဲ အာဏာရဖို့ အရေးအကြီးဆုံး အချိန်ပါဘဲ။
ဒီတစ်ခါ နောက်ဆုံး အခွင့်အရေးဘဲ။
.. ဟုတ် အရီးရေ.. မမြင်ဆို MPT တန်ခိုးနဲ့ log in တောင်မနည်းဝင်ရတယ်ဗျ.. ကိုယ်တိုင်ဇွဲမရှိတာလည်းပါတာပေါ့..
အရီးပြောသလို လူမျိုးတွေ များတာက အမှန်ပါပဲ.. မချို မတဲ့ နေနိုင်တယ်ဆိုတောင် ကိုယ့်အားကို ကိုး၊ ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ တောင်ဖြေရှင်းမရတဲ့ ကိစ္စတွေ အများကြီးပါ (မီးဘေး၊ရေဘေး၊လုံခြုံရေး၊ ပညာရေး၊ဆက်သွယ်ရေး……….).. ဒါကိုသဘောပေါက်ရင်တော့ ကိုယ့်ကိုအုပ်ချုပ့််မယ့်သူ ကို ရွေးခွင့်ရဖို့လောက်တော့ စိတ်ဝင်စားကြမှာပါ..
မရေး မရေးနဲ့ ရေးမယ့် ရေးတော့လည်း တကယ့်ကို အရေးကြီးတာ (ကိုယ်တိုင် ဇဝေဇ၀ါဖြစ်နေတာ) ကို ရေးလိုက်တာပဲ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတော့ မ အ ဘူး ထင်ပေမယ့်……… ( အနှစ် ၂၀ မှာ အစာငတ်နေမယ့် ကလေး ၁ သန်းလောက်ကို ကယ်ဖို့ ) လို့ ပြောမှပဲ ခေါင်းထောင်လာမိတယ်။ :b:
.. ရေးချင်တာလေးရှိလိုက် ပျင်းလို့ မရေးဖြစ်လိုက်နဲ့.. ဒီတစ်ခေါက်တော့ နည်းနည်းကြိုးစားပြီး ရေးဖြစ်သွားတာ..